ဒါဘီအသင်းတွင် ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ဝိန်းရွန်နီတာဝန်ယူမည်ဟုပြော…. – FBV SPORT NEWS
ဒါဘီအသင်းတွင် ကစားသမား နည်းပြအဖြစ် ဝိန်းရွန်နီတာဝန်ယူမည်ဟုပြော….
လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် ဒါဘီအသင်းသည် နည်းပြ ဖီးလစ်ကိုကူးနှင့် နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့သောကြောင့် အင်္ဂလန်လက်ရွေး အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဝိန်းရွန်နီက ယာယီတာဝန်ယူကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒတ်ချ်နည်းပြဖြစ်သူ ကိုကူးသည် ဒါဘီအသင်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်တွင် စတင်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ရာသီကုန်၌ အဆင့် ၁၀ နေရာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို ယခုရာသီတွင်လည်း ပွဲစဉ် (၁၁) အပြီးတွင် တစ်ပွဲသာ အနိုင်ရကာ ဇယားအောက်ဆုံးနေရာရောက် ရှိနေသဖြင့် နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဝိန်းရွန်နီက ယာယီတာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရွန်နီ (၃၅ နှစ်) သည် နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ရှေးဂစ်ဗင်း၊ ရိုဆီနီယာ၊ ဝေါ်လ်ကာတို့နှင့်အတူ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် စနေနေ့တွင် ပထမဆုံးပွဲအဖြစ် ဘရစ္စတိုးလ်စီးတီးအသင်းနှင့် အဝေးကွင်းကစားရမည် ဖြစ်သည်။
“ဖီးလစ်နဲ့ သူ့ရဲ့နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေ ထွက်သွားရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူကူညီပေးခဲ့တာတွေအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးက အသင်းရဲ့အခြေအနေကို တည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့ ဇယားအပေါ်ဘက်ကို စပြီး တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပါ။ စနေနေ့ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာ ကူညီဖို့ နည်းပြအဖွဲ့ကိုလည်း ပြောထားပါတယ်။
ရလဒ်ကောင်းများနှင့်အတူ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တာဝန်ကြီးမားကြောင်း ပထမဆုံးပွဲကိုင်တွယ်မည့်ပွဲတွင်နိုင်ပွဲရယူဖို့အတွက် တနင်္လာနေ့ကျရင် ကစားသမားတွေနဲ့ စကားပြောမှာပါ” ဟု ရွန်နီက ပြောကြားခဲ့သည်။